हत्केलामा यस्तो चिन्ह हुने व्यक्ति हुन्छन् कम समयमै धनी, तपाईको हातमा पनि छ की ? – Khabaarpati
October 15, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on हत्केलामा यस्तो चिन्ह हुने व्यक्ति हुन्छन् कम समयमै धनी, तपाईको हातमा पनि छ की ?
काठमाडौँ । हस्तरेखा ज्योतिषका अनुसार हत्केलामा विभिन्न किसिमका चिन्ह र रेखा देखिने गर्दछन्। ती रेखाको प्रभाव हाम्रो जीवनमा अलग अलग तरिकाले पर्ने गर्दछ। हस्तरेखा विज्ञानका अनुसार हत्केलामा बनेका चिन्ह र रेखाले व्यक्तिको भविष्यमा हुने विभिन्न कुराका संकेत दिने गर्दछ।
जुन व्यक्तिको हत्केलामा कुनै विशेष किसिमको चिन्ह्र छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई पद, धन र प्रतिष्ठा प्राप्त हुने गर्दछ। आज हामी तपाईलाई भाग्य बदल्ने रेखाका बारेमा जानकारी गराउँदैछौँ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
स्वस्तिक चिन्हलाई निकै शुभ मानिने गरिन्छ। कुनै शुभ कार्य, पूजापाठमा स्वस्तिक चिन्ह बनाएर पुजा गर्दा लाभ प्राप्त हुने धार्मीक विश्वास छ। सामुद्रिक शास्त्रमा पनि हत्केलाको स्वस्तिक चिन्हलाई निकै शुभ मानिने गरिन्छ। यस्तो चिन्ह भएका व्यक्तिको भाग्यमा धन सम्पत्तिको योग हुने गर्दछ।
स्वस्तिक चिन्ह जस्तै हत्केलामा तराजु चिन्ह हुनुलाई पनि निकै शुभ मानिने गरिन्छ। तराजुको चिन्हलाई लक्ष्मीको प्रतिक मान्ने गरिन्छ। जुन व्यक्तिको हातमा तराजुको चिन्ह हुने गर्दछ, त्यस्ता व्यक्तिमाथि माता लक्ष्मीको विशेष कृपा हुने शास्त्रमा उल्लेख छ। यस्ता व्यक्तिलाई धनको कमी हुँदैन्।
जुन व्यक्तिको हत्केलामा त्रिशूलको चिन्ह हुने गर्दछ, त्यस्ता व्यक्तिको भाग्यमा धन हुने गर्दछ। यदी त्रिशूलको चिन्ह मंगल पर्वतको माथि बनेको छ भने त्यसलाई निकै शुभ मानिने गरिन्छ। जसको सिधा संकेत धनवान, गुणवान र समाजमा प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नेतिर केन्द्रित हुने गर्दछ।
हस्तरेखा विज्ञानका अनुसारयदी हात्तिको चिन्ह शुक्र पर्वततिर हत्केलाको औँलामा बनेको हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिमा ब्रह्माको योग प्राप्त हुने गर्दछ। हत्केलामा यो चिन्ह भएका व्यक्तिसँग कहिलै पैसाको कमी हुँदैन । यस्ता व्यक्ति धेरै बुद्धिमान पनि हुने गर्दछन्।
यदी कुनै व्यक्तिको हत्केलामा कमलको चिन्ह छ भने त्यस्ता व्यक्ति जीवनमा कहिलै असफल हुँदैनन्। कमलको चिन्हलाई विष्णुको योग मानिन्छ। जस्ता व्यक्तिको जीवनमा कहिलै पैसाको कमी हुँदैन्।
खुसिको खबर : ५ हजार वर्ष पुरानो गणेशको मुर्ति फेला पर्यो, बेवास्ता नगर्नुहोला पूरा पडेर ॐ लेखि सेयर गरौं । कस्तो थियो हेर्नुहोस भिडियो